Ungakukhulisa njani ukuzithemba | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, Kufanelekile, ZeMpilo
Ukuzithemba kukuxabiseka umntu anako ngaye. Ukuba olu hlobo lokuqonda luphantsi, siyaluqonda njengokubona ngathi ngendlela ethandabuzekayo okanye engonwabisiyo, singazixabisi. Yonke into iya kusekelwa kwi iimvakalelo, iimvakalelo, amava okanye iingcinga ezenzekileyo ebomini bethu okanye kumzuzu othile, ukuze olu hlobo lweemvakalelo luhambelana nomzuzu wethu. Kungenxa yoko le nto kufuneka siphumelele ukuzithemba.
Ukuzithemba okuphantsi kukuzijonga gwenxa ngawe. Iqukethe uthotho lwezinto ezinokusikhawulela kakhulu kubomi bethu bemihla ngemihla, kwaye uninzi lwabantu aba bazama ukuzama ukuyibona le ngxaki okanye baye kwingcali ukuze babancede babone ingxaki yabo kwaye isombulule.
1 Iimpawu zokuba unesifo sokuzithemba okuphantsi
2 Ungakukhulisa njani ukuzithemba
Iimpawu zokuba unesifo sokuzithemba okuphantsi
Sonke sinomfanekiso ngokwethu, esingoobani, indlela esiziphatha ngayo phambi kwabanye, nokuba silungile na kwaye sihleli, siwanika amanqaku ethu obuthathaka. Kulapha xa sisenza umfanekiso wethu ukusuka kumncinci ukuya kwinqanaba lanamhlanje kwaye sakha umfanekiso wakho. Kule nxalenye kuxa sisenza ukugxeka kwethu kwaye sivavanye ukuzithemba kwakho, ukuba kuya kuba phezulu okanye kusezantsi. Iimpawu eziphambili ezilumkisa ngokuzithemba okuphantsi kunokuba:
Andiziva ndonwabile nesiqu sakho uhlala uphantsi ngaso nasiphi na isigqibo kwaye loo nto igxininiswa kukungazithembi.
Awufuni kuveza izinto ozithandayo kunye nezimvo zakho kuba usoyika ukungaxatyiswa ngokuchanekileyo. Kungenxa yoko le nto ungasoloko unxibelelana nabanye kuba ucinga ukuba awuzukuyithanda, okanye awuzukuyenza kakuhle.
Awuzami ukufumana le nto uyifunayo de kube sekupheleniUkuhamba phakathi, usenokuba sele uyiphosile itawuli ucinga ukuba awuyi kuyenza. Kungenxa yokuba ucinga ukuba awonelisekanga zizinto ozenzayo, nokuba zingangcono, kwaye zikulahle ngokulula.
Amaxesha amaninzi unyathelwa ngokulula, kuba awunabuganga bokunyanzela umlinganiswa wakho xa kufanelekile. Ucinga ukuba nasiphi na isigqibo okanye uluvo kungakhokelela ekusileleni. Kungenxa yoko kuhlala kunzima ukuba uthathe inyathelo lokuqala kuba uzithathela ingqalelo kwiimeko zentlalo kwaye ucinga ukuba awuzukuyithanda.
Ubona abanye bengaphezulu kuwe kwaye ungathanda ukufana nabo. Ukuziva ulungile uhlala ufuna ukwamkelwa ngabanye rhoqo. Ubeka impumelelo yakho kwithamsanqa, kwizizathu zangaphandle, kunye nokusilela kwakho ukuzibek 'ityala.
Kufuneka iqondwe into yokuba ukuzithemba okuphantsi akukuncedi ukuba ukhule njengomntu. Ekuhambeni kwexesha ivelisa iingxaki zokuziphatha kunye nolwalamano Sifuna ukujongana nabanye kunokubangela uxinzelelo kunye noxinzelelo. Ingabangela uxinzelelo kunye nokuzithemba kancinci, ke kuya kufuneka uqale ubeke amayeza amakhulu, ngokhuseleko kunye nokuzingisa:
Khangela unobangela. Mhlawumbi isizathu sithathelwe indawo yingxaki yobuntwana kwaye ukwazi nokukhangela imvelaphi kunokukunika ukuzithemba ngakumbi. Ubuntwana yintsika yobuntu bethu kwikamva kwaye ukuba siye safumana ukungavisisani okukhulu kungcono ukusoyisa ngokuzinceda okanye ngokufuna uncedo lobungcali.
Yeka ukujikeleza intloko. Ukuba ufuna ukuqala ngokuzinceda, yeka ukuhlala ucinga ngento enye. Unokucamngca iingcinga zakho, ujonge umzuzu wokuphumla kwaye wenze uboniso loyilo, kodwa ngamaxesha okubandezeleka kunye noxinzelelo sukunyanzela ukuba uhlale ucinga ngento enokuthi ingenandlela yakuphuma ngokungacingi ngokwenyani.
Injongo kukonwaba. Khangela onke loo maxesha kunye neziganeko ezikunceda ukuba uzive ulungile kwaye wonwabe. Yonke into ekwenza ube nethemba, uyixabise njengoko kufanelekile, uya kubona ukuba uneempawu ezintle kwaye kufuneka wazi ukuba ungazixhaphaza njani. Zithande kakhulu.
Zibekele iinjongo onokuhlangabezana nazo. Yimingeni elula onokuzibekela yona kwaye uzibone ukwazi ukuyoyisa. Kancinci kancinci sinokwandisa oko sizicebisa kuthi kwaye oko kuya kusinceda siphakamise ukuzithemba kwethu. Kuya kufuneka ufunde ukuba awuzukuvela okokuqala kwaye siyasilela iyakusenza sifunde kwiimpazamo zethu, Kulapho kufuneka silukhuthaze ulwazi lwethu kwaye sikwenze ngendlela eyahlukileyo, singaze sophule elo nyathelo.
Musa ukuzithelekisa okanye uzigxeke kabukhali. Kuya kufuneka ujonge kuwe kwaye ungabamoneli ubomi babanye. Into yokuqala ekufuneka usebenze kuyo yile yamkela kwaye ikuxolele. Isebenza ngokubhala ileta malunga nawe. Kuyo, chaza yonke into ongayithandiyo ngayo kunye nayo yonke into oziva unetyala ngayo. Nokuba kuthatha iintsuku ezininzi ukuyibhala, ungalibali naziphi na iinkcukacha. Ukusuka apho, yenza ukugxeka okwakhayo kwaye uvavanye onokukuphucula. Okokugqibela yivalelise ngalaa leta ngokuyiqhekeza kwiziqwenga eziliwaka.
Cinga ngemini yakho rhoqo ebusuku. Nguwe kuphela onokuthi uxabise izinto ezintle ezenzekileyo ukuba zibe lusuku oluhle, kwaye ukuba bekungekho, soloko unombulelo ngayo yonke into, ethe yavela ngengqondo ethile. Hlala ngokulungileyo kwaye uyala ububi, ukuba ulandela lo mzekelo ekuhambeni kwexesha unganceda ukuphakamisa ukuzithemba kwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Ungakukhulisa njani ukuzithemba